English စာကို အထိရောက်ဆုံးဖြစ်အောင် ဘယ်လောက်သင်သင့်လဲ? – SLD EDUCATION
Q: Enlgish ကို ဘာလိုသင်သင့်လဲ?
English ဆိုတဲ့ သူတစ်ပါးရဲ့ ဘာသာစကားကို ဘာလို့သင်ဖို့အားပေးလဲ ဆိုပြီး မေးချင်စရာတော့ရှိတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသင်ရဆုံးအလွယ်ဆုံး၊ အသုံးရအလွယ်ဆုံး ပညာရှာရမှာလည်း အသုံးဆုံးက မြန်မာစကားဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်က ချင်းလူမျိုးဖြစ်နေမယ်၊ ကချင်လူမျိုးတွေနဲ့လည်းအရမ်းခင်တယ်…ဒါပေမဲ့ ဦးစားပေး သင်ရမှာက မြန်မာစာပါ။ လောလောဆယ် ပညာရေး၊ စီးပွားရေး လူမှုရေးတို့ပိုင်းမှာ အသုံးရဆုံး၊ တစ်ခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့လည်း ဆက်ဆံလို့ရတဲ့ စကားမိုလို့သင်သင့်တာပါ။ English ဘာသာစကားလည်းအတူတူပဲ။ ပညာသင်မယ်၊ နိုင်ငံခြားကလူတွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်မယ်၊ လူမျိုးတိုင်းနဲ့ စကားဖလှယ်မယ်၊ internetမှာ info/research အတွက်ရှာမယ်…အကုန်လုံးမှာ အသုံးတည့်ဆုံးမိုလို့ပါ။ တခြားဘာသာစကား သင်ပါဆိုတာနဲ့ မိမိဘာသာစကားကိုမေ့ပါပြောတာမဟုတ်ပါ။ လိုအပ်လို့ ဒုတိယ ဘာသာစကားအနေနဲ့ သင်ခိုင်းတာပါ။ ကိုယ်က တကယ်လို့ သံရုံးတို့ ဘာတို့မှာ အလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆို ရင် နောက်ထပ် ဘာသာစကားတွေကို သင်ရမှာပဲ။ နိုင်ငံတခုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲသွားစေချင်တယ်ဆိုရင် ပညာရှာရာမှာ သုံးရမည့် English ကိုပိုတောင် သင်သင့်နေပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်ခွင်အတွက်လည်း နိုင်ငံခြားသားတွေပဲ လာလာဦးဆောင်နေစရာမလိုအောင် လုပ်မယ်ဆိုရင် လိုပါတယ်။
Q: English စာကို ဘယ်အချိန်စသင်သင့်လဲ?
10တန်းအောင်အောင်ချင်းသင်သင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၁၀တန်းအောင်အောင်ချင်းဆိုရင် ၁၀နှစ်‌ကျော် ကျင့်ပေးလာတဲ့ သုံးလာတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ ဦးနှောက်က စာသင်နိုင်တဲ့ စွမ်းအင်တွေအများကြီးရှိနေသေးလို့ပါ။ (ခြောက်လလောက်ဘာမှမသင်ဘဲနေရင် လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်တော့တဲ့ Muscleတွေလို့ အားလျော့သွားပြီး အစွမ်းသိပ်မထက်တော့သလို ဒီထက်ကြာအောင်နေပြီးမှ သင်မယ်ဆိုရင် ဦးနှောက်က တတ်ကျွမ်းနိုင်မှုတွေက ပိုခက်သွားနိုင်တယ်။
တက္ကသိုလ်တက်နေရင်းနဲ့လည်းသင်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချိန်တွေ တကူးတက ရှာပေးရတာဆိုတော့ အချိန်လုံလုံလောက်လောက်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာခက်သွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖြစ်အောင်လုပ်သွားတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်း ရှိပါတယ်။
* တက္ကသိုလ်ပြီးစလည်းသင်လို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်လည်းလုပ်ရ စာလည်းသင်ရနဲ့ ဆိုတော့ ပိုတော့ ခက်သွားတာပေါ့။ အလုပ်မှာလည်း performanceကောင်းချင်တယ်၊ English စာကလည်းသင်ရအုံးမယ်ဆိုတော့ ပင်ပန်းလို့ ပိုခက်သွားတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တတ်အောင်သင်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။
* အလုပ်လုပ်နေသူတွေဆိုရင်လည်း ညနေပိုင်းလေးတွေ သင်လို့ရပါတယ်။ ပေးနိုင်တဲ့ အချိန်က နည်းနည်းရှားသွားပြီး၊ အမြဲပင်ပန်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ English စာတတ်ဖို့က ပိုတော့ခက်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသက် ၅၀ကျော်လူတွေတောင် English စာကို မရမက တတ်အောင်သင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖြစ်အောင်လုပ်ရင် ဖြစ်ပါတယ်။
***အကောင်းဆုံးကတော့ ကလေးတွေ ၁တန်း၊ ၂တန်းကတည်းက သင်ပေးရင်တော့ ပိုကောင်းပါတယ်။ ၆တန်း ၇တန်းလောက်ရောက်ပြီဆိုရင် မွတ်နေအောင် စကားပြောနိုင်တဲ့အပြင်၊ ၁၂တန်းလောက်ရောက်တာနဲ့ research ပိုင်းတွေတောင် ကောင်းကောင်းရေးနိုင်ပါတယ်။***
Q. English စာတတ်ဖို့ က ဘာအလိုအပ်ဆုံးလဲ?
အဓိကကတော့ ခိုင်မာတဲ့ ဆုံးဖြတ်မှုတစ်ခုနှင့် အချိန်ပေးနိုင်မှုပါ။ တကယ်တတ်ချင်သလား? တတ်ချင်ရင် ဘယ်လောက်အချိန်ထိပေးသင့်ပြီးလဘယ်လောက်ကြိုးစားရမလဲဆိုတာကိုတွက်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ခိုင်ခိုင်မာမာလေးဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး တတ်အောင်သင်မယ်၊ လုပ်သင့်တဲ့အိမ်စာလုပ်မယ်၊ ပေးသင့်တဲ့ စာကြည့်ချိန်၊ ကျောင်းတက်ချိန်တွေပေးမယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်။ နောက်ပြီး စနစ်တကျ သင်ပေးမယ့် ကျောင်းကို ရှာပြီးတက်ပါ။ တစ်ခေါက်နဲ့ အတတ်သင်ပါ။
Q. ဘာလို့ တစ်ခေါက်ပဲသင်ပါပြောတာလဲ?
Englishစာဆိုတာမျိုးက level အနိမ့်ပိုင်းတွေမှာ… ၂လသင်လိုက်၊ ၂လနားလိုက်နဲ့ တချို့လူတွေလုပ်ကြတယ်။ အဲဒါဆိုရင် ဘယ်တော့မှ Englishစာကို မတတ်တော့ဘူး။ Gymသွားတာပဲ မြင်ယောင်ကြည့်လေ။ တစ်လသွားလိုက် တစ်လနားလိုက်ဆိုရင် ထိရောက်မှုမရှိဘူး။ ဘာမှဖြစ်မလာဘူး။ Gymကို ဆက်တိုက်သွား၊ ဆက်တိုက်ကျင့်သွားလို့ရှိရင် ၂နှစ်ပြီးတာနဲ့ ကြိုက်တဲ့ Muscleတွေရပြီဆိုတာနဲ့ ထိမ်းပေးသွားရင်ရတယ်။ Guitarတွေ၊ Pianoတွေသင်မယ်ဆိုရင်လည်း ကောင်းကောင်းတည်းတတ်ဖို့ဆိုရင် ၂နှစ်လောက်တော့ အချိန်ပေးမှ လက်သန်ပြောင်လာမှာ။ Englishစာဆိုရင်လည်း ပေးသင့်တဲ့ အချိန်တော့ ပေးရမှာပဲ။ ကိုယ်က Beginner ဆိုရင် ၁၂လလောက်သင်မယ်၊ ပုံမှန်စာကြည့်သွားမယ်ဆိုရင် ကောင်းကောင်းပြောတတ်ပြီ (Intermeidate Level အနည်းဆုံးရောက်ပြီ) Nativeတွေတောင် လန့်သွားအောင် သုံးပြစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ စာအုပ်တွေလည်းအများကြီးဖတ်ရမယ်၊ စာရေးနည်းအမျိုးမျိုးလည်းကျင့်ရမယ်၊ရေးရမယ်။ ဘယ် skillကို ပဲဖြစ်ဖြစ် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းလတစ်ယောက်ထိလောက် တော်ချင်တယ်၊ ကောင်းချင်တယ်ဆိုရင် နာရီပေါင်း 10,000 hours ပဲပေးလိုက်ပါ။ အဲဒီ နာရီတွေကိုလည်း ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာ/trainerတွေနဲ့ ကျင့်ရမယ်။ ဒါကြောင့် English စာကိုတစ်ခေါက်ပဲသင်ပါ။ သင်ပြီဆိုတာနဲ့ ရပ်လိုက်၊ နားလိုက်မလုပ်ပဲသင်ပါ။ Intermediate ထိဆိုရင် တစ်levelကို စနစ်တကျ နာရီပေါင်းကို ကျောင်းတက်တာ၊ အိမ်စာလုပ်တာတွေကို အကုန်ပေါင်းရင် နာရိပေါင်း ၂၀၀ လောက်နဲ့ တွက်ပြီး ကျင့်မယ်ဆိုရင် ဘယ်နနာရီ သင်ရမယ်၊ ဘယ်လောက်ကျင့်ရမယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကို တွက်ကြည့်လိုက်ပါ။ Intermediate လောက်ရောက်ပြီဆိုရင် ပုံမှန်လေး English books/moviesတွေကိုဖတ်/ကြည့်ပေး၊ အပေါင်းအဖေါ်တွေနဲ့ ပြောကျင့်သွားမယ်ဆိုရင် skills ကမကျတော့ပါဘူး။ Pre-Intermediateလောက်နဲ့ ရပ်သူတွေက ပြန်ကျတာမြန်ပါတယ်။
Communicative methodနှင့် ကောင်းကောင်းသင်နိုင်တဲ့ ကျောင်းတွေဆိုရင်တော့ အများအားဖြင့် စျေးကြီးပါတယ်။ စျေးကြီးတယ်ဆိုတာကလည်း ထိထိရောက်ရောက်သင်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ဆရာဆရာမတွေက နှစ်ပေါင်းများစွာ သင်တန်းတွေတက်ရပါတယ်။ Certificatesတွေရအောင်လည်းလုပ်ရပါတယ်။ Levelတစ်ခုတစ်ခုဆိုရင် အဲသလိုမျိုးသင်တန်းကျောင်းတွေမှာ အများကြီးစျေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ SLDလိုကျောင်းမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ တိုင်းပြည်တစ်ခု ပြောင်လဲဖို့ ပညာရေးအ‌ရေးကြီးကြောင်းကို နားလည်းတဲ့အတွက် လူငယ်တိုင်းတတ်သင့်တဲ့၊ လူငယ်တိုင်းတတ်နိုင်တဲ့ Englishစာကို အတတ်နိုင်ဆုံး စျေးသက်သာအောင်ကြိုးစားသင်ပေးပါတယ်။
Q. English စာကို ဘယ်လိုသင်သင့်လဲ?
မြန်မာနိုင်ငံက ကျောင်းသူကျောင်းသားတိုင်းကို လူအများ ပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့ အမှားကို ဆက်ပြီး မလုပ်စေချင်လို့ English စာသင်နည်းလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်…
Englishလို ကောင်းကောင်းသုံးတတ်၊ ပြောတတ်ဖို့ဆိုရင် တစ်ခြားနိုင်ငံကသူတွေက အထက်တန်းကျောင်းမှာပဲ တတ်လာကြတာပါ။ ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်ကာပူ၊၊ မလေးရှားနိုင်ငံ ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် အပြင်English speaking သင်တန်းတွေမရှိသလောက်ပဲ။ ရှိရင်လည်း ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ တခြား ဉရောပနိုင်ငံကလူတွေကို သင်ပေးဖို့ ဖွင့်ထားတာကများပါတယ်။ ဘာလို့သူတို့ English စာထပ်မသင်တာလဲ? ၄တန်းမှာ English စာစသင်ပြီဆိုပါစို့။ ဆရာ၊ဆရာမတွေက English လိုပဲ စပြောပြီး၊ အတန်းထဲမှာ ကျောင်းသားတွေကို activities အမျိုးမျိုးနဲ့ ပြောခိုင်းတယ် ရေးခိုင်းတယ်ဆိုတော့ လအနည်းငယ်အတွင်း ကလေးတွေကမွတ်နေအောင် ပြောတတ်နေကြပါပြီ။ အတန်းတက်သွားပြီဆိုရင် projectအမျိုးတွေလုပ်ခိုင်းတယ် တင်ပြခိုင်းတယ် ဆိုတော့ English ကို ၁၂တန်းပြီးတာနဲ့ နက်နက်နည်းနည်းသုံးနိုင်သွားတယ်။ ဒါကတော့ ကျောင်းကောင်းတွေမှာ ဖြစ်တဲ့ဟာပြောပြတာပါ။ မြန်မာကကလေးတွေ ၁၁တန်းအောင်ပြီဆိုလည်း ရိုးရိုး communicationပိုင်းတောင် မ‌ပြောတတ်နိုင်တာက အတန်းထဲမှာ သုံးခွင့် သိပ်မရလိုက်ကြလို့ပါ။
အစိုးရကျောင်းမှာသင်ပေးတာတွေကမကောင်းဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ မြန်မာက ၁၀တန်းအောင်ပြီးသား ကျောင်းသားတွေဆိုရင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံက ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေထက် Grammarတွေ၊ Vocabularies တွေအများကြီးကို အများကြီးပိုသိပြီးသားပါ။ သုံးနိုင်တဲ့နေရာမှာသာအားနည်းတာပါ။ ဒါပေမဲ့ သုံးခွင့်မရတဲ့စကားလုံးတွေဆိုရင်တော့ ၆လထက်ပိုပြီး ထပ်မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့မေ့သွားတတ်ပါတယ်။ ၁၀တန်းအောင်အောင်ချင်း များများပြော၊ များများရေးရမည့် အတန်းတွေမှာ လိုက်တက်မယ်ဆိုရင် Englishကသူတို့အတွက် အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် English စာစသင်ပြီဆိုတာနဲ့ များများသုံးခွင့်ပေးတဲ့ ကျောင်းတွေမှာတက်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုသင်တတ်တဲ့သူတွေဆိုတာက English ကို communicative methodနဲ့ သင်နိုင်တဲ့ certified ဆရာ/မများနဲ့ သင်သင့်ပါတယ်။ ငုတ်တုတ်ထိုင်ခိုင်းပြီး စာပဲရှင်းတဲ့… နောက်ကအော်ပြီးလိုက်ရွတ်ခိုင်းတဲ့ ပုံစံနဲ့ ထပ်သင်ရင် နောက်ထပ် ၁၀နှစ်သင်လည်း English ကို သုံးတတ်အုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အော်အော်ရွတ်မယ်ဆိုရင် မပြောတတ်တဲ့အပြင် စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုပိုင်းတွေမှာလည်း မတိုးတက်လာပါဘူး။ Communicative method နဲ့ သင်တဲ့ ကျောင်းတွေမှာ ပေါင်းသင်ဆက်ဆံရေးပိုင်း၊ အတွေးအခေါ်ပိုင်းတွေအပြင်၊ တီထွင်ကြံဆတတ်တဲ့ ဉာဏ်တွေတိုးပွားလာပါတယ်။
Applicationတွေကိုပဲအားကိုးမယ်၊ Youtubeပဲကြည့်သွားပြီးသင်မယ်ဆိုလည်း အနည်းဆုံး Pre-intermediate Levelထိကျောင်းမှာလိုက်တက်ပါ။ အလွတ်ကျက်၊ စာရွတ်တတ်တဲ့ ၁၀နှစ်ကျော် တစ်ပုံစံထဲတွေးလာ၊ ကျက်လာတဲ့ ဦးနှောက်ကို Communicative method ကို ကြိုက်လာဖို့၊ ရင်းနှီးလာဖို့ဆိုရင် ၂လလောက်တော့ အချိန်ယူပြောင်းရတယ်။ Beginner ကနေ Pre-Intermediate လောက်ထိဆိုရင် ၆လလောက်တော့အချိန်ပေးရမယ်။ အဲဒီ Level ရောက်မှ ဘာတွေဆက်လုပ်သွားသင့်တယ်ဆိုတာလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားမယ်။
How to get started?(အင်္ဂလိပ်စာကို ဘယ်လို စလေ့လာရမလဲ)